Immisa Waji Ayaa Ku Jira Emailkaaga Ugu Dambeeya? | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 3, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Waxaan ka helaa in ka badan 100 emayl oo khuseeya maalintii… Waan ogahay inay taasi waxoogaa dhib tahay. Waxay si gaar ah u dhib badan tahay marka emaylku run ahaantii uusan ahayn mid khuseeya. Sidaas oo kale ayaa ah e-maylladaan 'LinkedIn' ee iiga sheekeeya dadka ku jira shabakaddayda ee beddelay cinwaannada shaqo. Ma caawin karo laakiin iskaan baanka wajiyada oo guji-si aan u hubiyo waxa ku socda dadkan iyo shaqooyinkooda. Waan hubaa in e-maylkan 'LinkedIn' uu leeyahay mid ka mid ah heerarka gujiska ugu sarreeya ee warshadaha emaylka.
Waxaan ka helaa emayl maalintii oo dhan shabakadaha bulshada oo leh magacyada iyo isbedelka xaaladda dadka ku dhex jira, laakiin si dhif ah ayaan u sii qodo. Marka uu jiro sawir, in kastoo, isla markiiba waan qoslaa waana inaan gujiyaa. Waxay iga dhigeysaa wax yaab leh… miyaad aragtay wax tirakoob ah oo ku saabsan CTR-yada emaylka oo wata sawirro (oo aan ahayn sawirro sawir ah) oo dad ah? Malahayga waa hadaad dhigto a wajiga dhabta ah emaylkaaga, waxaad u badan tahay inaad ka heli doontid natiijooyinka dhabta ah.
Aug 4, 2011 at 7: 15 AM
Ma waxaad uga jeeddaa inaad sawir ku darto saxiixa?
Agoosto 4, 2011 saacaddu markay ahayd 8:04 PM
Waxaa laga yaabaa in saxiixa, Kenneth! Waxaan u maleynayaa in sawirada dadku ay had iyo jeer qasab yihiin - kana xoog badan yihiin qoraalka.
Aug 5, 2011 at 12: 06 AM
Malaha sawir saxeexan! Waxaan u maleynayaa in dadku ay ku qasban yihiin inay taas hoos ugu dhacaan. Waxaan xiiseynayaa haddii aan ku daro ama ku daro sawirada macaamiisha iyo shaqaalaha si fudud ayey gacan uga geysataa shakhsiyeynta emaylka oo ka dhigtaa mid rafcaan u leh akhristayaasha. Waa wax aan u baahanahay inaan tijaabino!